mardi, 04 août 2015 20:07
Haitrano : Lasa lavenona ny vola tokony hanaovana famadihana
Trano telo no indray kilan’ny afo tao Atsimontsena Antsirabe ny tolakandro teo tokony ho tamin’ny 4 ora. Tsikonina nataon’ny ankizy no tombanana fa nihavian’ny afo ary niitatra, tsy voafehin'ny Fokonolona. Tsy manana fiara mpamono afo ny Kaominina Antsirabe ambonivohitra fa ny an’ny «Groupe Socota» no tonga nanampy tamin’ny famonoana ny afo ; saingy entana maro no lasa lavenona, anisan’izany ny vola an-tapitrisa notehirizina hanaovana famadihana. 20 mianaka no traboina tsy fidiny taorian’ity haitrano ity.
mardi, 04 août 2015 17:52
Mitaraina ireo tanora amin'ny faritra iva.
Nanjary lasa nahazatra ny nijery ireto tanora maro sady tsy mianatra no tsy an'asa. Fantatra anefa fa ny 50% n'ny Malagasy dia latsaky ny 18 taona avokoa.Fijery hafa no atao amin'izy ireo, ary endrikendrehina ho fototry ny tsy fahandriampahalemana.
Ny filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy, Dr Rakoto Endor Modeste sy ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary niara-nanao sonia ny fifanarahana
lundi, 03 août 2015 22:51
Fanabeazana ireo manana fahasembanana : Miara-miasa ny FLM sy ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena
Tontosa tao Antsirabe anio tolakandro ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Mikasika ny fanabeazana «MAMPIATY» na ny fanabeazana tsy mialon-jafy ity fifanrahana ity ka hampitoviana zo ireo zaza manana fahasembanana sy ireo zaza salama tsara. Nambaran’ny filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy, Dr Rakoto Endor Modeste fa efa hatramin’ny taona 1924 no nampiharan’ny Loterana ny fanabeazana ireo manana fahasembanana ara-pahitana ka ity fifanarahana mandritra ny 5 taona ity dia hifanakalozana traikefa satria efa natomboka ny taona 2009 ny fampiharana ny fanabeazana «MAMPIATY» eo anivon’ny sekolim-panjakana. Hisy ihany koa ny fanofanan’ny fiangonana loterana ireo mpampianatra hisahana izany eny anivon’ny sekolim-panjakana, tafiditra ao anatin’ity fifanarahana ity.
dimanche, 02 août 2015 21:47
Ilakaka : Nidina an-dalambe ny mponina manohitra ny fandresen'ny HVM
Miahiahy hosoka sy hala-bato ny vahoaka ao Ilakaka ka nidina an-dalambe sady nilanja sorabaventy, manambara fa ny kandidà tsy miankina no nofidian'ny maro an'isa fa tsy ny HVM araka ny vokatra vonjimaika mivoaka.
dimanche, 02 août 2015 19:02
Torana an-dalana avy nifidy, nodimandry io maraina io ilay lahiantitra Namoy ny ainy ny maraina teo ilay raim-pianakaviana 60 taona, torana niakarapoka teny an-dalana, rehefa avy nifidy ny atoandron’ny zoma 31 jolay teo, tao Betania Toliara. Tsy fantatra mazava na vokatry ny aretina androbe nitaiza azy hatry ny ela na antony hafa no nahasafotra azy teny an-dalana, hoy ny finakaviany. Tamin’ny fotoana nahitan’ny manodidina azy taorian’ny fianjerany dia nivoa-drà ny lohany sady nahitana farora-bava fotsy teo amin’ny vavany.
Trano hazo miisa 35 no ravan’ny afo tanteraka tao Kianjasoa-Kilaovalo Atsimondampa, 18 km miala ao Ambohibary-Sambaina manaraka ny lalam-pirenena faha-43 miazo an’i Faratsiho. Entam-barotra, vola, vokatra ary entana sy kojakoja maro no lasa lavenona ary fianakaviana am-polony no traboina tamin’izany. Tsy fantatra mazava ny mety nipoiran’ny afo na misy milaza aza fa nivoaka avy tao amin’ireo mpanao mofo sy kafe tao afovoan-tsena izay miasa amin’ny alina no mety niavian’izany. Ny afo efa niredareda ka niitatra tamin’ireo trano manodidina no nanaitra ny olona. Ravan’ny afo tanteraka ny trano fonenan’ny fianakaviana maherin’ny folo izay sady nivarotra no nonina tamin’ireo trano ireo ka tsy manan-kialofana noho izany ka any amin’ireo mpiara-monina sy fianakaviana aloha hatreto no mipetraka. Nampanantena ny hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary taorian’ny tatitra natao tany amin’izy ireo.
Nanomboka ny alatsinainy 27 jolay teo ny Fanompoambe 2015 tao amin’ny Doany Miarinarivo ao Tsararano Mahajanga. Nandritry ny fikarakarana ireo “mitahy” na ireo taolambalon’Andriamisara, Andriamandisoarivo, Andriamboeniarivo ary i Andriananiana na Andriandahifotsy izay samy Ampanjaka sy Mpimasy nitondra tao Boeny tao anatin’ny trano atao hoe Zombabe dia tehaka sy poa-basy no re nanenika ny doany atsimo. Ny tanjona amin’ity taona ity dia ny fampitambarana ireo Sakalava sy ireo mpanompo rehetra. Ka na dia nisy aza ny fanambarana tao amin’ny haino aman-jery ny amin’ny fanakanana avy tamin’ireo taranaka Ampanjaka hafa fa tsy tokony ho nisy ny Fanompoambe teto amin’ny doany atsimo, dia tanteraka soa aman-tsara izany.
Depiote Andriamasimanana Auréline mitafa amin'ireo mpiara-dia aminy
lundi, 27 juillet 2015 14:07
Ambatondrazaka : Misy mandrahona ho faty ireo kandidan’ny Alaotra Miray Hina
Velon-taraina amin’ny fihetsika asehon’ireo kandida sasany ny fikambanana Alaotra Miray Hina. “Tsy fampielezan-kevitra intsony no atao fa fihantsiana sy fandrahonana ho faty”, hoy ny Solombavam-bahoaka Andriamasimanana Auréline. Lasibatra amin’izany ny kandidan’ny Alaotra Miray Hina any amin’ny Kaominina Andilana Avaratra sy Ambatondrazaka ary ireo any amin’ny Kaominina ambanivohitra. Misy amin’ireo kandida any amin’ny Distrikan’Amparafaravola koa no mahazo fandrahonana famin-dratoerana. Tokony handray ny andraikiny ny CENI-T hoy ny depiote Auréline amin’ireo karazana tsy fanarahan-dalàna ataon’ny kandida sasany ireo. Miezaka mampitony ireo kandidany sy ny mpiara-dia aminy hatrany ny depiote Auréline manoloana ireo tranga rehetra ireo.
dimanche, 26 juillet 2015 22:13
Toliara : Saribao 4 000 gony saika haondrana any shina sarona
Saribao miisa 4000 gony saika haondrana an-tsokotsoko any Shina no tra-tehaky ny zandary tao amin’ny seranan-tsambon’i Toliara. Tanan-kavanana solombavambahoaka iray voafidy any an-toerana no tompony ary milaza ho nahazo taratasy fahazahoan-dalàna hanondrana saribao mankany ivelany avy amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny ala ny tenany, na dia voararan’ny lalàna aza izany. Noho ny fanondranana saribao an-tsokotsoko dia nidangana ny vidin’ny saribao fandrehitra ao Toliara ary sarotra hita. Efa misy tompon’andraikitra sy mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny ala arahi-maso amin’ity bizina ity.
dimanche, 26 juillet 2015 18:43
Toliara : Zazakely napetra-dreniny tao ambany fiara mpanao propagandy
Taitra ireto andian-jatovo ka nihoraka nahita zazakely iray sahabo ho iray taona sy tapany eo, nigogogogo nitomany nisy nametraka tao ambany kamiao nitondra mpanao propagandy, ny sabotsy tolakandro, tany Toliara.